Noocyada dumarka ee raggu neceb yahay - iftineducation.com
Noocyada dumarka ee raggu neceb yahay
iftineducation.com – Gabadh kasta waxay xaq u leedahay inay doorato ninka ay doonto.
Waana shay cadaalada ka fog in lagu khasbo cid aanay rabin.
Gabdhuhu ama habluhu waxay soo maraan heerar kale duwan, marka laga eego xagga da’da. Inta u dhexayso 15 jir ilaa 20 jirka, habluhu intooda badan raggu waa isugu mid.
Waana xilliga ay gabadha ku adag tahay habka xulashadu. Waxayna u baahan tahay in si joogta ah tallooyin la siiyo. Si ayna ugu dhicin booraan. Laakiin marka la gaadho 20 iyo wixii ka weyn waxay figrad buuxda ka haystaa habka ay u xulan lahayd ninkii ay nolasheeda ku aamini lahayd.
Gabadhu waa inay ka feejignaataa khiyaamooyinka ay kula kacaan ragga qarkii. Iyagoo isticmaalaya erayo ama hadalo macaan oo aan dhaafsanayn afka baarkiisa. Waa inay iska shaandhayso, balanqaadyada ay soo qadimaan raggu, iyagoo doonaya
inay fushadaan ujeedooyin qarsoon. Waa inay noqotaa gabadh fiiro badan oo aan si fudfud loo duufsan Karin.
= markaan ku arko ayaan farxad kala qaboobaa.
= muxu ilaahay kugu manaystay qurux, caqli iyo garasho.
Markay gabadhu maqasho erayadaa ama qaar u dhigma way ku raaxaysanysaa, ka dibna
waxay gabadhii ku beermaya jacyl xaddhaaf ah.
6) Dabeecad wanaagsan
Calaamadaha dumarka wax jecel.
= waxay la soo baxaysaa xishood aad u badan
= waxay jeceshahay inay mar kasta kul joogto
= waxaad ku arkaysaa shaki badanm oo ay kaaga shakiyayso inay gabadh kale kaa
qaado. Laakiin shakigaasi maaha kii xumaanta ahaa, ee waa jacyl xadkiisii
= waxay la soo baxaysaa inay markasta garaacdo tilifoonkaaga,si ay u maqasho
= gabadha ninkeeda meel kasta ku cidhiidhada, ee ka garab hadasha. Marna aan
= gabadha doonta inay ninkeeda ka sarrayso ama u taliso. Wax kastuu soo jeediyo
= gabadha markasta ninkeeda ka codsata lacag dheeraad ah, oo ka baxsan tan
gurigeed ku filan.
Waxyaabaha dumarka lagaga farxiyo.
=in loo keeno hadiyado kala duwan.
Qoraaladan waxan ka soo xigtay buuga magaciisa la yidhaa: men are from mars and
Aqristoow adigana Fikradaada ka dhiibo hadii aad u aragto qaar aan soconeyn mise aan ku cancin, meesha hoose faaladeede noogu soo gudbi